Oromiyaan ragaa hojjettoota naannichaa kuma dhibba 5 diijitaala taasiisuuf hojjechaa jiraachuu beeksise – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Oromiyaan ragaa hojjettoota naannichaa kuma dhibba 5 diijitaala taasiisuuf hojjechaa jiraachuu beeksise
On Jan 6, 2021 154
Finfinnee, Muddee 28, 2013 (FBC) – Biiroon Pablik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa ragaa hojjettoota naannichaa kuma dhibba 5 diijitaala taasiisuuf hojjechaa jiraachuu beeksise
Jilli Ministir Deettaa Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii Dooktar Ahimaddiin Mahammadiin durfamu Biiroo Pablik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaatti hojiilee diijitalaayzeeshii hojjetamaa jiru daawwateera.
Biirichi ragaa hojjetoota dhaabbilee naannichaan keessa hojjetanii kuma dhibba 5 ol gara diijitaalaatti jijjiiruuf hojjetaa jiraachuu beeksiseera.
Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii tattaaffii taasiifamaa jiru kan deeeggaru ta’uu Dooktar Ahimaddiin Mahammadiin dubbataniiru.
Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Namarraa Bulii milkaa’ina hojichaaf ministeerichi deeggarsa akka taasiisu gaafataniiru.
Daayreektarri olaanaan Abbaa Taayitaa Saayinsii fi teeknooloojii odeeffannoo Oromiyaa Injiinar Jimaa Tulluu Infoormeeshiinii diijitaalaa naannichaa ariifachiisuu fi qindoominaan raawwachuuf qophiin taasiifamaa jiraachuu dubbachuu isaanii ragaan Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojiirraa argame ni muul’isa .
Birrii miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 80 kan ijaarrame bu’uuraaleen misoomaa ICT…